Galmudug oo gacanta ku dhigeen Gaari laga soo dhacay Wasiir ka tirsan Puntland * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A A warsame	 On May 14, 2017
Gaalkacyo ( Mareeg)-Ciidamada Maamulka Galmudug ayaa gacanta ku dhigay Gaari ay lahayd Wasiir ku xigeenka Haweenka Puntland oo Kooxo Burcad ah ay soo qafaasheen.
Wararka ayaa sheegaya in Gaarigaasi iyo Raggii Burcada ahaa ee soo dhacayba gacanta ay ku dhigeen Ciidamada Ammaanka Galmudug.
Tani ayaa sii xoojineyso wada shaqeynta iyo Xiriirka Maamullada Puntland iyo Galmudug.
Dhawaan ayey ahayd markii Maxaabiis ay isweedaarsadeen labadaasi Maamul oo ku aadan dad falal dambiyeedyo ka soo geystay labada Maamul deegaanno ka kala tirsan.
African Union Mission in Somalia Engages London Diaspora Community
Somaliland oo gacanta ku dhigtay hub farabadan iyo Taliska…
Dad hor leh oo Cudurka COVID-19 ugu dhintay Somalia iyo…
Faah faahin:-Al-shabaab oo weerar khasaaro geystay ka…
Galmudug oo kulan deg-deg ah ka yeelatay xaaladda Cudurka…
Sweden oo War kasoo saartay heshiiskii Dowladda iyo…
Muwaadin Soomaali ah oo xaaskiisa u dilay sabab siweyn looga…
DEG DEG:-Dagaal culus oo ka socda Galmudug iyo wararkii ugu…
Xaalad halis ah oo ka jirto deegaano ka tirsan Gedo iyo…
Taliye ku dhaawacmay Qarax ka dhacay Muqdisho oo xilka laga…
Saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo lagu daray Liiska…
Yaa amray dilkii lagu fuliyay 2 sanno kahor Wariye Jamaal…
Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan xasaasi ah la qaatay Beesha…
Puntland oo Go’aan kasoo saartay Banaanbax la qorsheeyay…
Dowladda oo hakisay qabashada codsiyada Baasaboorka…
Shil naxdin leh oo ka dhacay duleedka Garoowe iyo khasaaro…
Puntland oo shuruudo Culus ku xiray ka qeyb galka Shirka ka…
Ugaas siweyn looga yaqaanay Soomaaliya oo Goor dhow…
Beesha Caalamka oo Baaq Deg-deg ah u dirtay Dowladda iyo…